Imoto "Daewoo Nexia" Yavela-ke eyokuqala kuya emakethe emhlabeni ngo-1995, unyaka. Ngenxa yesikhulumi onjiniyela Korean waboleka isakhiwo se-German "Opel ubusosha", ukukhiqizwa eye wayeka in the 80s. Nokho, nokubambisana ezikanye "General Motors" corporation American futhi Italian design studio Ital-Design ekwenzele baseKorea ukwakha imoto zabantu ngempela, okuyinto Akumangalisi zonke ngonyaka ozayo ngeke ukugubha unyaka wayo lama-20.
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, kodwa "Nexia" izinhliziyo abashayeli Russian kuyoba isikhathi eside futhi mhlawumbe abangakaze ubalekele imigqa yokuqala yokuthengisa rankings. Isihloko sanamuhla sizobe waphinda kuzinikela Korean "engxenyeni kahulumeni", kodwa ngalesi sikhathi siyobona "Nexia" amehlo abanikazi imoto ngokwabo.
Izibuyekezo wabanikazi ( "Deo Nexia") design
Ithi yini oyithandayo, futhi wama-95 imishini enjalo, futhi ngisho ngaleso intengo, futhi wawungekho. Ngokusho Izibuyekezo nabanikazi, "Deo Nexia" wabheka isizinda nezinye imishini akuzona sibi lomphangi "Boomer". Omunye umshayeli yabika ukuthi ngelinye ilanga ukuthi ukushayela umuntu asanda kuluthola "Nexia" eHungary eRussia. Futhi nakhu iqiniso ezithakazelisayo: ngesikhathi (futhi igceke oko imizuzu 95 nje, futhi ukuba khona 'Nexia "awukakaziwa eyaziwa) emigwaqweni zendawo ku traffic, abanye abashayeli bayesaba ukuba ibalekele kwesokunxele, luvula indlela" lomphangi "," Nexia ". Kodwa esibukweni esimenza abone into engemuva, engawuboni yiba nombono amangalisayo - headlamps ayisesemikhulu futhi "impumulo" omkhulu eside. Beshayela uzizwa sengathi awunaso umnikazi subcompact Korean zinesizotha futhi kakhulu futhi lo wamkhohlisa out "Boomer." Kodwa eduze 2000, isimo saqala ukushintsha. "Nexia" abangu bakamalalahlengezela avele emakethe Russian, zinjalo peregonschiki ayisekho amazwe - Izimpahla wenza ngokusemthethweni. Futhi manje namandla aso, njengathi Izibuyekezo okuqinisekisiwe kwezinto abanikazi, "Deo Nexia" baphelelwa.
Ngaphansi hood we "Korean" wabekwa phambi restyling nje eyodwa engu 1.5 litre amandla injini 75 "amahhashi". Ngo-2002, uhla yisikhungo esisodwa yazuza enye engu 1.5 litre, kodwa injini 85-amahhashi. Kuyaphawuleka ukuthi izitshalo ezimbili ngamandla babe enokwethenjelwa kakhulu. Sedan "Deo Nexia" Injini ukulungisa ayidingeki olandelayo 200 noma 300 ayizinkulungwane amakhilomitha. Odinga ukukwenza ngaphansi hood, ngakho-ke njalo ukwengeza uwoyela inhlansi ushintsho. Eqinisweni, wachoboza kahle, oh, kakhulu ezingavamile. Ngaphezu kwalokho, umshini libhekene Dynamics eliphezulu zisakaza. Ngokusho Izibuyekezo nabanikazi, "Deo Nexia" overclocked ngokuqiniseka endleleni eya 170-175 amakhilomitha ngehora. Ngesikhathi esifanayo in the gumbi kwavele kwenza waphika (ngaphandle umshini wokubonisa izinga lejubane) ukuthi imoto ihamba cishe 200 emgwaqeni omkhulu. Smooth Ukugibela - lena enye inzuzo "Nexia".
Ukucabanga ukuthenga? Khona-ke ezimbalwa amazwi mayelana nezindleko. Kuthengiswe entsha "Deo Nexia" eMoscow ngentengo ruble 320 kuya kwezingu-360, kuye ukucushwa. Nento eyodwa ngaphezulu - ungalokothi ukuthenga "Nexia" sasihlangene Uzbekistan! Kuphela "Korean" lweqiniso kuyofanele injini onokwethenjelwa futhi umzimba linamandla ukugqwala. Uzbek "Daewoo", by the way, kukhona abolile ngaphakathi engu-3, kanti-Korean "run" iminyaka engu-17 - futhi akukho nokugqwala kuphi. Futhi ucabanga, kungani ukubuyekeza, omunye Ukudumisa "Nexia" nabanye belulekwa ukukhohlwa ngakho, sishaye odakeni? Ikhwalithi Yakha, nodadewethu, ukwakha izinga!
Moscow esinezitezi ezinhlanu: ukubhidliza izakhiwo. Uhlelo kubhidlizwe agugile "hruschovok" eMoscow